China Fluorobenzene rụpụta na Factory | Ugboro
CAS Mba: 462-06-6
Ọdịdị: Igwe na-acha mmiri dị ọcha
Ọcha (GC): 99.9% min
UN No.2387, Klas: 3, grouptù ngwugwu: II
Ọ na-eji gafee ụlọ ọrụ, ọgwụ, electronical;
A na-ejikarị ngwaahịa a eme ihe maka nkwadebe nke isi akụrụngwa nke ọgwụ antipsychotic, dị ka fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, wdg. N'otu oge ahụ, a pụkwara iji ya maka njirimara nke pesticides, akwa ogbu, plastik na resin polima. Ihe odide nke fluorobenzene na γ - chlorobutyryl chloride nwere ike ịmepụta γ - chloro-p-fluorophenone, nke a na-eji na-emepụta haloperidol na ọ bụ ọgwụ a na-ejikarị eme ihe na butyrylbenzene antipsychotics.
A-☑ Na ụlọ ọrụ eletrọniki, A na-eji ya maka batrị nwere mbukota pụrụ iche, mmiri a na-achịkwa kpamkpam; Fluorobenzene enweghị ike ịme ka mmekọrịta dị n'etiti Li + na DME sikwuo ike, kamakwa gbochie mbibi nke DME ruo n'ókè ụfọdụ; Ọzọkwa, fluorobenzene nwere ike belata na lithium anode iji mepụta LIF, nke nwere ike ịnweta ngwa mkpuchi nchebe ngwa ngwa. Dabere na nke a bifunctional e ji mara, elu ịta electrolyte diluted na fluorobenzene nwere ike ọ bụghị nanị na budata mma kwụsie ike na coulomb arụmọrụ nke lithium anode (nkezi coulomb arụmọrụ bụ 99.3% mgbe kwụsie ike okirikiri karịrị 500 okirikiri), ma nwekwara ike-eji na usoro nke bara uru zuru batrị ule ọnọdụ (gụnyere elu elu ike, ala okpomọkụ gburugburu ebe obibi, elu ugbu a njupụta, Magburu onwe ịgba ígwè arụmọrụ e nwetara na ala electrolyte ọdịnaya na àjà ihe ọ thinụ thinụ-mkpa lithium anode;
☑ A na-ejikwa ihe dị ọcha na-adịghị ọcha nke fluorobenzene nke ọma na electrolyte nke batrị lithium-ion. E jiri ya tụnyere electrolyte nkịtị nwere carbonate, a ga-eme ka arụmọrụ nke batrị lithium-ion dịkwuo mma site na ịgbakwunye nnukwu fluorobenzene, nke nwere uru doro anya na arụmọrụ arụmọrụ nke obere okpomọkụ, ndụ batrị na ikike iwepụ ọkụ dị elu. Fluorobenzene nwere ike iweta mmiri na usoro nke mmepụta, njem na nchekwa. Ọ bụrụ na mmiri dị oke oke, ọ ga-emetụta ọdịnaya mmiri nke batrị lithium-ion batrị. Oke mmiri dị elu nwere mmetụta ụfọdụ na arụmọrụ electrochemical nke batrị. N'ozuzu, mmiri dị na electrolyte na-achịkwa ya;
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-akwado;
☑ Ndị ahịa Japan akwadoro ngwaahịa a maka iji kọmputa. Anyị nwere teknụzụ iji tufuo mmiri n'ihe banyere mmepụta, mbukota na njem, iji hụ na ogo;
Mbupu Oge Naanị: Oge izu 1 si n'ụlọ nkwakọba ihe nke Shanghai;
Osisi ahụ dị nso na HF, si otú a belata ego ma hụ na mmepụta ahụ na-aga n'ihu;
Nke gara aga: Acid na-eme ka Crotonic
CAS 453-18-9, CAS 608-25-3, Amụma, C10-C14-tert-alkyl, CAS 3003-25-2, (R) -3-Aminobutanol, 2-Methyl resorcinol,